ओमकार टाइम्स ग्यासको मूल्य २५ रूपैयाँ घट्दा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य कति पुग्यो? – OMKARTIMES
ग्यासको मूल्य २५ रूपैयाँ घट्दा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य कति पुग्यो?
काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा समायोजन गरेको छ।
निगमले जनाएअनुसार साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक र डिजेल-मट्टितेलमा ५० पैसा मूल्य वृद्धि भएको छ। एलपी ग्यासमा भने प्रतिसिलिण्डर रु २५ घटाई मूल्य समायोजन गरिएको छ।
जसअनुसार काठमाडौँ (थानकोट डिपोबाट १५ किमी क्षेत्रभित्र) मा पेट्रोल १०९ प्रतिलिटर र डिजेल र मट्टितेलमा ९७ प्रतिलिटर नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य कायम गरिएको छ। एलपी ग्यासको खुद्रा बिक्री मूल्य (काठमाडौँको हकमा) एक हजार ३७५ प्रतिसिलिण्डर कायम गरिएको छ।
हवाई इन्धनको हकमा खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत राखिएको छ। निगमले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा एलपी ग्यासमा करीब रु छ अर्ब नोक्सानी ब्यहोरेको थियो। जसको कारणले हालसम्म स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन हुन सक्ने अवस्था आएको थिएन।
मूल्य समायोजन गरेपश्चात् पनि वीरगञ्ज नाकामा नेपालतर्फको मूल्य रक्सौलकोे तुलनामा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर क्रमश १४ रुपैयाँ ३७ पैसा र १५ रुपैयाँ ४७ पैसा सस्तो रहेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए।